मेरो इच्छाशक्तिले प्रदेश नम्बर तीन समृद्ध बन्छ, स्थायी राजधानी हेटौँडा नै हो
एमाले प्रदेश ३ को संसदीय दलको नेतामा डोरमणि पौडेल निर्वा्चित भएका छन् । योसँगै उनलाई प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ । यसअघि चर्चामा नरहेक पौडेल प्रदेश नम्बर तीन एमालेको संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएपछि सबै आश्चर्यमा परे । मकवानपुर प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेशसभा ’ख’ बाट निर्वा्चित डोरमणि पौडेल एमालेका पुराना नेता हुन् । उनी ३८ वर्षदेखि राजनीतिमा निरन्तर सक्रिय छन् । काठमाडौंको तत्कालीन फर्पिङ गाविसमा वि. सं. २००२ चैत १५ गते जन्मिएका पौडेलको स्थायी ठेगाना मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका– ११, नवलपुर हो । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि लिइएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।